Vakuru Vakuru veHurumende Vopesana paMihoro yeVashandi Vayo
Chikunguru 04, 2011
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti mari dzemihoro dzinonzi dzakawedzerwa vashandi vehurumende, ishoma zvichienzaniswa nemari inotarisirwa kuti mushandi ange achitambira.
Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa mari itsva dzemihoro neChishanu nesangano rinomirira vashandi reApex Council, mushure mekusangana nevamiriri vehurumende mumusangano we Joint Negotiating Council.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika mubazi rezvemari vataura neStudio 7 vati hurumende haina mari yekuwedzera vashandi vayo, uye hapana chisungo chati chaitwa panyaya yemihoro.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vaudza Studio7 kuti vanokwanisa chete kutaura nezvemari idzi neChipiri mushure mekusangana nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai.
Apex Council yakazivisa neChishanu kuti mushandi wepasi aizowedzerwa nemadhora makumi matatu nerimwe, kunyange hazvo vashandi vaida kuti vatambire mari inoenderana nePoverty Datum Line.
Mutauriri waVaTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ichiti haina mari, VaTsvangirai semunhu akabva muvashandi vanoda kwazvo kuti vashandi vawedzerwe mari dzinoita kuti vararame.
Sachigaro weApex Council, Amai Tendai Chikowore, vatiwo danho ravakatora rekuzivisa mari dzemihoro rakatsigirwa nezvavakawirirana mumusangano weJoint Negotiating Council neChishanu.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti rehurumende, VaPaddy Zhanda, vati komiti yavo haina ruzivo nezvekuwedzerwa kwemari dzevashandi uku. Asi vati hurumende inokwanisa kuita izvi isina kugara pasi nekomiti yavo. VaZhanda vati gurukota rezvemari rinokwanisa kuita imwe bhajeti, kana kuti supplementary budget kuti riwedzere mari dzevashandi.
Asi nyanzvi mune zveupfumi uye vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Coalition on Debt and Development, VaMasimba Kuchera, vati hurumende inokwanisa chete kuwedzera vashandi vayo mari kana yakwanisa kubata upfumi huri kubva muzvicherwa zvakaita semangoda.
Hurukuro naPaddy Zhanda